Kitra – Barea de Madagascar: efa mandeha ny fizarana ny « primes de qualification» | NewsMada
Kitra – Barea de Madagascar: efa mandeha ny fizarana ny « primes de qualification»
Efa manomboka mandeha ny fizarana ilay « prime de qualification » nampanantenaina ireo mpilalaon’ny Barean’i Madagasikara, taranja baolina kitra. Io no nambaran’ingahy Benony Jacques, mpikambana eo anivon’ilay « comité de normalisation », omaly.
Nohamafisin’Ingahy Benony, tsy nanadino izany ny teo anivon’ny federasiona, fa niandry ny fotoanany avokoa ny zava-drehetra. Fantatra, fa tsy hitovy ny vola ho azon’ireo mpilalao, miankina tanteraka amin’ny isan’ny andro nandraisany anjara nandritra iny dingana fifanintsanana iny izany. Nomarihiny hatrany, tsy ny mpilalao irery no nahazo izany tambin-kasasarana izany, nomena ny sahaza azy koa ireo mandrafitra ny « staff technique » rehetra tao, izay tsorina, hoy izy fa isan’ny nahamasaka tsara iny nahandro iny. Antenaina izany fa hiravona hatreo ny disadisa sy ny tsy fifankahazoana, saika nanamaloka kely ihany mialoha ny fiatrehana ny Can 2019.
Haseho etsy Mahamasina ny Barea
Raha tsy misy ny fiovana amin’ny ora farany, ny alatsinain’ny Pantekosta no haseho ny vahoaka etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina ny Barean’i Madagasikara, hahitan’ny rehetra ireo mpilalao hiatrika ny CAN voalohany izany. Hisy ny fanzarantena ataon’izy ireo mandritra izany, izay antenaina fa fotoana ihany koa hanomezan’ny vahoaka azy ireto ny fampaherezana amin’ny fiatrehana ity lalao goavana ity izany. Aorian’io, handray ny tso-drano avy amin’ny filoham-pirenena izy ireto, mialoha ny handehanany any Maraoka, hiatrika fampivondronana farany mialohan’ny handehanana any Ejypta. Ny 16 jona no tombanana hifandona amin’i Mauritanie izy ireto, fihaonana atao any Maraoka hatrany. Mialoha io, hisy ilay fihaonana amin’i Luxembourg, tanterahina amin’ny fiandohan’ny volana jona hatrany.